Actorylọ ọrụ posture Corrector - China ndị na-emepụta ụlọ nrụpụta ziri ezi China, Ndị na-eweta ya
X-udi posture fixor
Ngwongwo neoprene siri ike na iku ume na-enyere gi aka imeziwanye onodu ojoo, dolata azu, ubu na olu olu, mee ka akwara gị guzozie ma kwụ ọtọ n’oge niile. N'adịghị ka ndị na-agbanwe agbanwe mgbe niile na-agbanwe agbanwe ma na-amachibido mmegharị aka. Gosiputa udiri adabara nke nwoke na nwanyi n’ime oge niile. You nwere ike iyi ya n’okpuru uwe gị yana enweghị ike ihu anya.
Uzo eji agbazi agbazi
Ọkpụkpụ ụdị ọzịza postor imewe, ọsụsọ na akwa ihicha akwa, melite ọrụ gị ka ị ga - egosi ogologo ma nwee ntụkwasị obi, na - agbagide ubu na olu mgbu, guzosie ike n'isi, ihe a họọrọ nke ọma Velcro, kwụsie ike ma chebe akwara, akwa dị nro, iku ume ma nwee ahụ iru ala, ọ dị mfe iyi ma wepụ ya na eriri uro na-agbanwe agbanwe.
Ihe nkpuchi mara mma ma dị mma na akwa na-egbu maramara, anaghị ebipụ ogwe aka, obosara ya na akwa akpụkpọ anụ azụ na-akwado nkwado na eriri a na-agbanwe agbanwe, ihe Velcro a họọrọ nke ọma na ntachi siri ike, nke kwụsiri ike, na-emeziwanye ọnọdụ gị ka ị ga-apụta ogologo na nwee obi ike, na-akwụghachi ubu na olu mgbu, ọ dị mfe iyi ma wepu ya na eriri ubu na-agbanwe agbanwe.
Ọkpụkpụ azụ azụ nkwado
Nkwado azụ bụ atụmatụ mepere emepe, dị mfe maka ịme, nha efu ka ọtụtụ mmadụ nwee ike iji ya. Ọ nwere ike itinye paịlị na-ekpo ọkụ. Uwe nchekwa nchekwa dị elu, okpukpu abụọ Y na-edugharị ụzọ, nko siri ike na akaghị, mpempe ígwè n'ime nkwado azụ na-eme ka ọkpụkpụ azụ gị kwụ ọtọ. Ọ bụ njiri arụmọrụ ergonomic nwere eriri eji emegharị ubu na eriri ukwu iji nye ohere kachasị.
Ejiri ngwaahịa a iji meziwanye ọnọdụ hunchback ma ọ bụ lumbar vertebra erughị ala. N'iji udiri eriri obe na akwa a na-eku ume, ma di iche na ihe nkwado ndi ozo, nke a na-agbaso usoro ihe eji eme ya, na-eme ihe n’azu ya dum, ihe a na-aputacha nke oma. Ma emere ya dika ergonomic nke mmadu siri di, yabụ kọmpat dabara dabara n’arụ ahụ.